Literature News: Find Latest News on Literature
शिबु छेत्रीको कृति ‘म उभिएको धरती’ लोकार्पण
सिलगढी (भारत) । बाल साहित्यमाथि कलम चलाउँदै आएका सुपरिचित पत्रकार एवं 'हिमालय दर्पण'का सम्पादक शिबु छेत्रीको दोस्रो कृति ‘म उभिएको धरती’ नेपाली साहित्यको संसारमा अर्को नयाँ उपलब्धी भएको छ। विस्तृतमा
५ बर्षअघि म कोरिया हानिदा, मेरी जुनु बेस्सरी रोएकी थिई । आठ बर्षकी छोरी र छ बर्षको छोरोलाइ उसको काखमा छोडेर बिदाई हुदा म आफ्नो पौने शरिर लिएर हिडेको थिए। आशु चुहाउदै दैलोमा राखिएको कलशमा उनले आफ्नै आशु भरे झैँ लाग्थ्यो। मेरी श्रीमती जुनु कसरी बस्लीरु म नेपाल हुदा पनि कहिल्यै हामी मजाले संगै बस्न पाएनौ।
भित्र छिर्नेबित्तिकै अभिलाई हाँसो उठ्यो । म र जयन्ती पनि हाँस्यौँ । बुवा र आमालाई हामी हाँसेको कारण थाहा भएन । ट्रेनभित्र छिरेपछि अभि यसरी हाँसे
'रिसाउन पटक्कै मन छैन'
साथीहरुको लहैलहैमा लागेर विकेन्डमा करिब ११ बजे राति म एउटा ट्रेन प्लेटफर्ममा छु । आठ घण्टा काम गरेर बेस्सरी थाकेको शरीरले अघि नै देखि निहुँ खोजिरहेको छ । मलाई बिलखबन्दमा पार्ने मेरी हितैषी साथी उसको कोठानेर फुत्रुक्क झरिसकेकी छे । ऊसँगको आधा घन्टाको साथको लागि बाँकी एक घण्टा म एक्लै हुने निश्चित भयो, त्यो पनि ‘आप्mटर वोर्क’ । ‘विकेन्ड’, जड्याँहाहरु बग्रेल्ती भेटिने रात !
अष्ट्रेलियामा.... यी पैसा
व्यस्त सिड्नीको पानी परेपछिको बिहानी, काममा जाने समय, सडक छेउको पार्क अनि छेउछाउमा पानी नै पानी छ । अझै पनि सिमसिम पानी परिरहेकै छ । बेलाबेलामा वाइपर चलाउनु परेको छ आज । मेरा लागि ड्राइभिङ आज अलि असहज भएको छ । दायाँबायाँ हेर्दै सुस्त रफ्तारमा अघि बढिरहेको छु म ।
एक बारको जिन्दगी
“के नचाहिने कुरा ग¥या होला ?” उसले मेरो कुरालाई तुरुन्त प्रतिक्रिया दिँदै मलाई हपा¥यो ।
साहित्यकार रेशम विरही क्यान्सरसँग लड्दै, अर्थ संकलनकाे तयारीमा लेखक तथा पत्रकारहरू
काठमाडौँ । पाँच दशकदेखि पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील रेशम विरही क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका छन् ।
संघर्षः जनताकी छोरी विमला
विमला आमाको पेटमा हुँदै बुबा स्वर्गे भए । ‘आमा छोरा–छोरीलाई भन्दा काकालाई बढी माया गर्नुहुन्थ्यो,’ विमला भन्छिन्, ‘छोरा–छोरीलाई मकै दिएर बाहिर पठाएको अनि बाबर हालेर काकालाई दिने गरेको घटना चाहेर पनि उनी बिर्सिन सक्दिनन् ।’
सर्प नभएको कथा !
आज कार्लीले उसकी छोरीले घरमा सर्प लिएर आएको कुरा गरि । त्यो पनि पाइथन । पेट एनिमलको रुपमा । कार्लीले पाइथनलाई पाहुना बनाउन सकेको कुरै सुन्दा पेट बटारियो ।
नेता र कर्मचारी !
ऊ भन्दैथ्योः नेपालमा नेपालीले न्याय पाउनुपर्छ ! नेपालमा नेपालीले बस्न पाउनुपर्छ !